09.05.2020 Category: Aucune catégorie
Kana zvasvika kune Hébergement de sites Web kune zvakawanda zvakasiyana zvingasarudzwa zviripo. Imwe neimwe ine yavo mérite, dzakasiyana mumhando uye mutengo mapenji. Nhasi tichave tichitora tarisa kuVirtual Private Server (VPS) yekutambira.
2 Hébergement serveur Yakagoverwa vs VPS vs Akazvitsaurira
2.2 Hébergement dédié
Serveur privé virtuel VPS inomiririra. Un volet VPS inzvimbo yakasarikwa seva ine maitiro eese sevha pachayo. Izvi zvinoreva kuti iine iine yayo Chekushandisa System (OS), zvishandiso, zviwanikwa, uye nekumisikidza. Zvese izvi zvirimo mukati meimwe serveur rine simba. Imwe neimwe sevha inogona kuva neakaundi akawanda eVPS pazviri.
Tekinoroji yeVirtualisation inoongorora sevha yakazara uyezve inokamura zviwanikwa pakati peakaundi akasiyana zvichienderana nezvakabhadharwa nevaya account. Semuenzaniso, kana sevha ine 128 Go de RAM, inogona kupatsanura iyo mumativi maviri kana anopfuura.
Mumwe nemumwe ane compte anozopihwa huwandu hwe RAM sekutsanangurwa kwavo muchibvumirano chekubata. Izvo zviwanikwa zvakagoverwa kune imwe neimwe account ndezve account iyoyo uye hazvizobatwe mukati kana mamwe maakaundi achida kana kushandisa zvimwe.
Yakavimbiswa zviwanikwa – Mémoire, Inogadzirisa nguva, kuchengetedza, nezvimwe hazvizombofa zvakagoverwa.
Réagilité du degré Yakakwira – Iwe unowana niveau serveur rekutonga masimba akadai sekuwana midzi, sarudzo yeOS, nezvimwe.
Évolutivité yekushandiswa kwenguva refu kwenguva refu
Hébergement serveur Yakagoverwa vs VPS vs Akazvitsaurira
Nekudaro, kuve nevanhu vakati wandei kugoverana nzvimbo yakafanana zvinoreva kuti panofanira kuve paine imwe degré yekupa nekutora. Zviwanikwa zvinoda kugoverwa (semuenzaniso, vanhu vashanu vachitenderera kuti vashandise imba yekugezesa).
Kune vazhinji varidzi webhusaiti avo vanosarudza kushandisa vakagovana mabasa ekugovana nekuda kwechinyore chikonzero icho chiri nyore kubata uye kwakachipa. Vanotakura vanovapa masevhisi vanozotarisira kuchengetedza sevha, saka ivo varidzi vewebhu vanongoda kutarisa pakuvaka uye kushanda kwavo saiti.
Kugovana zviwanikwa dzimwe nguva zvinogona kuva nemamiriro ezvinhu asingafano tarisiro. Semuenzaniso, kana imwe webhusaiti yaizobatikana zvakanyanya uye nekushandisa upfumi hwakawanda zviwanikwa, webhusaiti yako inogona kuramba yakamirira. Izvi zvinokanganisa mashandiro enzvimbo yako kuburikidza pasina mhosva yako. Tariro yako chete yekugadzirisa ndeyekuti iyo hogi yekuburitsa inoburitsa zviwanikwa zvairi kushandisa, kana kana webhu saiti yako ikapindira.
Fournisseurs d’hébergement VPS: InMotion Hosting, TMD Hosting, BlueHost
Serveur dédié hébergeant yakaita kuva muridzi weimba. Iwe wakasununguka kutamira chero kupi zvako mukati meimba yako yaunoda. zvisinei, iwe unofanirwa kuribhadharira chikwereti uye zvikwereti zvingadhura.
Saizvozvo, serveur mune chaiyo yakazvitsaurira, iwe unobhadhara kune yese sevha haina kugoverwa nemumwe munhu. Iwe unozowana kudzora kwakakwana pamusoro peese masevhisi. Nehurombo, iyo zvakare yakanyanyisa kudhura yekusarudza sarudzo uye inoda humwe hunyanzvi hwekugadzirisa.
Iyo inowanzoshandiswa nevaya vane mawebhusaiti vane zvakananga zvinodiwa. Cette inogona kusanganisira kukwanisa kubata yakakwira yewebhu traffic kana yakawandisa kuchengetedza zvinodiwa.